Aísa Ulwandle olunamandla. Udliwanondlebe nomlobi wombhali Ngubani obone iMermaid? | Uncwadi lwangoku
Aísa Ulwandle olunamandla. Udliwanondlebe nomlobi wombhali Ngubani obone iMermaid?
Ukufota: ngoncedo lukaMar Aísa Poderoso.
Ulwandle olunamandla lweAisa Uvela eZaragoza, uprofesa onesidanga sezeMbali kunye nombhali. Inoveli yakhe yamva yile ¿Ngubani okhe wabona intombazana entle? Kule nto udliwano ndlebe Usixelela ngaye, ngomsebenzi wakhe, umdla wakhe kunye neeprojekthi. Imibulelo emininzi ngobubele bakho nexesha lakho.
UMar Aísa Poderoso-Udliwanondlebe
UNCWADI NAMHLANJE: Inoveli yakho entsha inesihloko esithi ¿Ngubani okhe wabona intombazana entle? Usixelela ntoni ngayo kwaye uvela phi umbono?
ULWANDLE OLUQINILEYO: Yimeko yesibini yabazalwana baseCárdenas, enokufundwa ngokuzimeleyo kweyokuqala, Dostoevsky engceni. Zizo iinoveli zobugebenga, ezibekwe ikakhulu eLogroño, isixeko endihlala kuso iminyaka engamashumi amabini anesithandathu, kwaye ndibalasele UDiego Cárdenas, usekela mhloli wamapolisa kunye nodadewabo, uLucía, umguquleli. Aba babini bakwixesha elinzima, disenchened ngobomi. Ngokuchanekileyo ukuxhasana kwabo kunye nokuhambelana kwabo ekusombululeni iimeko kuya kubakhokelela ekubeni bazifumane, kancinci kancinci.
Kukho ii-microcosms ezahlukeneyo nge Abalinganiswa besekondari abaphumelele uthando lwabafundi njenge-coroner, amapolisa asebenza no-Diego, okanye uLucía kwi-arhente yokuguqulela. Ndiqale ukubhala eli tyala lesibini, nditsho nangaphambi kokuba ndipapashe inoveli yokuqala, kuba ndiqinisekile ukuba abalinganiswa banoluhambo oluninzi; Mna ngokwam bendifuna ukwazi ukuba zeziphi iindlela abazakuzithatha.
Ukuqala kweenoveli zam kuhlala kuza kum nomfanekiso, isibane. Kule meko yayiyimfesane encinci kwi-Gothic façade yaseSan Bartolomé, icawe entle embindini weLogroño. Kulapho ke inoveli iqala khona. Ujongene nomceli mngeni wokugcina ubuncwane bokuqala, kodwa wabunika ubutsha.
Kule meko, u-Diego ujongene nokubonakala kwesibini esele siswelekile ekhayeni lakhe, kwinto ebonakala ngathi licacile ubundlobongela obuphathelele kwezesini. Ukufunyanwa kweeleta ezindala ezifihlwe kwitafile yokunxiba, kunye ne-ajenda apho kuvela ezinye izivumelwano ezingaqhelekanga kunye nomvumisi, kuya kukhokelela kuphando. Useto lwenoveli lusisa nakwiindawo ezinje EParis okanye eZaragoza, idolophu yakowethu, apho imeko ihlala iqhubeka.
Abafundi sele bendithumela umbono wabo; Bayayithanda kwaye bayakuxabisa ukulinganisela phakathi kwesiqwenga somdlalo, abalinganiswa abaziva bekhululekile kunye nabo kwaye bafuna ukudibana nabo, imeko-bume kunye neemvakalelo. Kubonakala kubalulekile kum ukuba, ukongeza kwisiqwenga somfundi, umfundi unokufumana incindi kwaye afumane ezinye izinto eziqhubeka nokuvakala xa kugqityiwe. Enye into ebodwa yile Ukubhekisa kubugcisa, imbali okanye cinema yeklasikhi, ibethelelwe kwibali ngokwalo.
Ndiyathanda ukuba bandixelele ukuba bafuna ukuyigqiba ukuze bafumane imfihlakalo, kodwa, kwangaxeshanye, bayabasizela kuba baziva bekhululekile ngaphakathi kwinoveli. Andizukuveza ngaphezulu, kungcono ukuba abafundi bazifumanele ngokwabo.
Imephu: Ndibhala kuba ndingumfundi. Umfundi okhoyo kwaye onwabile kakhulu kukufunda ukusukela ebuntwaneni. Ngaphambi kokuba ndifunde ukufunda, ndikhumbula amabali awandixelela umakhulu wam ngaphambi kokuba ndilale. Emva koko kwafika Iintsomi zokufa zikaFerrándiz. Kamva Enid Blyton, UVictoria Holt… Kwaye, ekugqibeleni, tsiba uye kumakhulu eencwadi awayenazo utata kwivenkile yeencwadi. Ngaphandle kwamathandabuzo, Agatha Christie Yayikukufumanisa okukhulu. Emva kwexesha kwafika abanye ababhali abanjengo UPearl S. Buck, uLeon Uris, uMika Waltari, Colette, njl. Ukusukela kwasekuqaleni ndandiqhele ukuya notata rhoqo ngolwesiHlanu kwivenkile ethengisa iincwadi kunye nokuthenga iincwadi ezimbini zeveki. Kungoko nam ndaqala ukuyila eyam ithala leencwadi. Ndiyikhumbula njengolonwabo olusulungekileyo.
Ndabhala ibali lam lokuqala xa ndandineminyaka esixhenxe, Kwisibini se-EGB. Ndiyakhumbula kuba le khosi ititshala yam indinike ukuba ndifunde ekhaya ikopi yayo Inkosana encinci; Ndaziva njengeyona ntombazana yonwabileyo emhlabeni. Oku kundikhuthazile ukuba ndibhale awam amabali kwincwadana yokubhalela umama ayigcwele ngephepha eliluhlaza noluhlaza.
Ngexesha ukufikisa, kwezinye iiklasi ekwakunzima ukuba siqwalasele kuzo, wabhala Amabali ezothando kubahlobo bam, behleli kwilizwe abalikhethileyo, enye into yayixhomekeke kwingcinga yam. Ngokumangalisayo, luhlobo endingakhange ndilubambe kwakhona.
Buyela ngaphakathi 2001 Ndithathe isigqibo sokubhala inoveli yam yokuqala. Kuqeqesho lwam BA kwimbali Ndatsala umdla kwi- uhlobo lwembali. Ndamnika ibhaso lodumo, ewe, andizange ndiphumelele. Nangona kunjalo, ndilonwabele kakhulu olo hambo lokuya eMadrid ukuya kuzisa ngesandla lo mbhalo kumshicileli uqobo. Kwakumnandi kakhulu kwaye kungenakulibaleka.
Imephu: Andinakukhetha enye; Ndonwabile ababhali abaninzi, abaneencwadi zabo endizifunde kumanqanaba ngamaxesha ahlukeneyo ebomini bam.
Ndiyaluthanda uncwadi lweXIX kunye nesiqingatha sokuqala seXX: UJane UAusten, Las UBrnte, UFlaubert, Stendhal, IBalzac, Oscar Wilde, Tolstoy, UDostoevsky, Emilia UPardo Bazán, UClarín, UWilkie Collins, UEdith UWharton, UScott Fitzgerald, Forster, uEvelyn Ukulila, Agatha Christie okanye UNémirovsky.
Ngokusondela ngexesha, ndingachaza abanye abaninzi: UIsabel Allende, uCarmen Martín Gaite, uPaul Auster, uDonna Leon, uPierre Lemaitre, uFred Vargas nabanye abaninzi. Zonke zinento efanayo yokuba zindonwabisile, zibonisa okanye zindishukumisile. Ngamnye kubo ushiye umbhalo kum; Ndifunde kubo bonke. Ekugqibeleni, isitayile sombhali sakhiwe kubuntu bakhe, amava kunye, ewe, kunye nokufunda.
Imephu: Ndiza kukhetha ezimbini: UAna Karenina, apho wayeza kuba nencoko ngobomi kunye nothando. Ndingathanda ukuhamba naye ngezitrato zaseSt.
Omnye umlinganiswa endinokuthanda ukonwaba naye ngokuhlwa kukuhle Kwimigby. Andizukundwendwela iNew York kwinkampani yakho. Kubonakala kum njengabalinganiswa abanomdla, abagcwele izibane kunye nezithunzi, ii-nooks kunye neekreyini, zemibala.
Imephu: Ndiyayithanda, ukuba inokuba njalo, bhala wedwa uthe cwaka, kodwa ndiyaziqhelanisa. Njenge-anecdote ndiza kukuxelela lonto Ngubani okhe wabona intombazana entle? Ndiyigqibezele eZaragoza, ndihleli esofeni, ndivalelwe emva komatrasi kwigumbi elinabantu abaninzi, ngelixa umyeni wam nabantwana bepeyinta bedibanisa ifanitshala. Ngamanye amaxesha awunakukhetha.
Ndifuna kuphela incwadi elungileyo ukuba ndiyifunde, abanye abanamdla kum.
Imephu: Kukho iindawo apho ndijonga ngcono. Kwindlu yam Logroño Ndinayo encinci desktop phambi kwefestile endibona ngayo ukuba imithi iyazulazula kwaye abantu beza behamba; Yindawo endinika ukuzola kwaye apho ndihleli kamnandi khona. Kwi ehlobo, Ndiyakuthanda kakhulu ukubhala endlwini yam eMedrano apho ndinento entle Umbono weNtaba. Apho ndaqala khona Ngubani okhe wabona intombazana entle? Nangona kunjalo,, Dostoevsky engceni Kwavela ngeholide eVinarós. Inkqubo ye- umtshato kuyakhuthaza kakhulu.
Ngokumalunga nexesha losuku, ndikhetha ukubhala ku ekuseni, xa wonke umntu esalele nendlu ithe cwaka. Elinye ixesha endihlala ndithatha ithuba ngalo ngenjika Langa. Akunakuze ngokuhlwa, emva koko ndikhetha leer. Kwimeko yam, ukufunda kuyondondla ukuqhubeka nokubhala. Yinto yemihla ngemihla.
Ndingutitshala kwaye kufuneka ndixolelanise umsebenzi wam kunye nobomi bosapho, kodwa Ndizama ukubhala yonke imihla, nokuba ngamagama nje ambalwa. Ndiyakholelwa, ngaphandle kwamathandabuzo, ukuba ungasoloko usenza ixesha lezinto ozikhathaleleyo kwaye onomdla kuzo.
Imephu: Njengomfundi ndiyayithanda ifayile ye- ebalisayo kwaye ndiyayonwabela inoveli yembali. Andikukhupheli ngaphandle ukuzazisa ngenye imini njengombhali ngezi ntlobo.
Imephu:Ndiyafunda Ithuku, Ngu-Ashley Audrain. Incwadana enomdla, eyimvelaphi. Imincili yengqondo ethetha ngobumama kwaye ixhokonxa, ayishiyi ingenankathalo. Ukusuka kwinqanaba lokujonga, ukusetyenziswa komlandisi kumntu wokuqala nowesibini kunomdla kakhulu, kunye nexesha lokutsiba. Ndiyayincoma, ngaphandle kwamathandabuzo.
Ndikunye netyala lesithathu labazalwana baseCárdenas, ebekwe entwasahlobo. Dostoevsky engceni ikhula ekwindla kwaye Ngubani okhe wabona intombazana entle? ebusika. Nangona kunjalo, ndinemibono emitsha ebhabha entlokweni yam. Umbhali kukho umzuzu onomdla: xa ucinga ukuba ungasondela kwibali elimnandi.
KWI: Ucinga ukuba injani imeko yokupapasha? Ngaba ucinga ukuba iyakutshintsha okanye sele iyenzile loo nto ngeendlela ezintsha zokuyila phaya?
Imephu: Alithandabuzeki elokuba inqanaba lokupapashwa es nkqo. Kukho amaqela okupapasha anamandla alawula imarike kunye neninzi yabapapashi abancinci nabaphakathi ekufuneka bekhuphisane nomgangatho okanye ngesindululo esithile. Nangona kunjalo, kuyinyani ukuba kukho iindlela ezahlukeneyo apho umbhali ongaziwayo anokufikelela kupapasho lweencwadi zakhe. Akukaze kubekho maninzi amathuba kunye namathuba njengangoku. Emva kokupapashwa, uhambo luqala apho umbhali kufuneka abandakanyeke kwikhulu leepesenti. Ngaphandle kwamathandabuzo, iinethiwekhi zentlalo zizinto ezifanelekileyo zokuzazisa nokwazisa iincwadi zakho. Sonke siyazi ukuba akukho lula kwaye isithembiso sikhulu, kodwa kum, wonke umfundi otyale ixesha lakhe kunye nemali yakho kwincwadi yakho ngumvuzo omangalisayo Okungaphezulu kokuhlawula iinzame ezityaliwe.
Kwintliziyo yam iphupha lam yayikukushicilela, ngokucacileyo. Umbhali ubhala kuba uyayonwabela, kuba uyawuthanda loo mzuzu wokuhlala phantsi ukwenza abalinganiswa kunye namabali, kuba uyawufuna njengokuphefumla. Kodwa, ngaphezulu kwako konke, bhala ukuze bayifunde, ukuze nabanye bawonwabele amabali abo.
Kuyinyani ukuba ukupapasha kubonakala kungafikeleleki kum. Kangangexesha elide ndizinikezele ekubhaleni ngendlela yabucala, ngumyeni wam kuphela owayesazi. Ungumfundi wam wokuqala, ugxeka kakhulu ngeyona ndlela, yiyo loo nto ndisithemba isigwebo sakhe. Ngamaxesha athile, kufuneka kwenzeke into ekutyhala ukuba uthathe inyathelo lokuqala. Kwimeko yam, yayikukulahleka kwabantu ababini endibathandayo ngexesha elifutshane kakhulu. Ngelo xesha ndandisazi kakuhle ukuba kukho inqaku ebomini elingenakubuya. Xa yonke into iphela, uthatha kuphela oko ubuphila, okonwabe ngako, into oyithandayo. Ndacinga ukuba andifuni kuzisola xa sele kuhlwile kwaye akukho nto ndizakuphulukana nayo ngokuzama.
Kuyinyani baninzi abantu ababhalayo kwaye abafuna ukupapasha, kufuneka sinyaniseke. Luhlanga olukude apho Kuya kufuneka uthathe amanyathelo, uzingise kwaye usebenze ngokuzimisela kuyo.
Imephu: Sikumzuzu ontsonkothileyo, ndingatsho ukuba kutshintsho lwexesha. Njengombhali-mbali ndiyazi ukuba iingxaki ziyenzeka, nokuba kunzima kakhulu Ngelixa uziphilayo, kwaye emva koko amaxesha angcono ahlala esiza. Ubuncinci, ndinqwenela izizukulwana ezitsha. Malunga noncwadi, ubugcisa okanye umculo, mhlawumbi eyona misebenzi mihle ivele kwelona xesha limnyama. Inkcubeko ilula, ihlala igcina.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Udliwano-ndlebe » Aísa Ulwandle olunamandla. Udliwanondlebe nomlobi wombhali Ngubani obone iMermaid?